Godka ku jira lakabka ozone ayaa xasiliya markii ugu horeysay | Saadaasha Shabakadda
Daloolka lakabka ozone waa ku dhowaad adduunka oo dhan waa la yaqaan. Gaasaska lagu koriyo ee loo yaqaan 'chlorofluorocarbons (CFCs)' ayaa hoos u dhigay uruurinta ozone ee aagga Antarctic. Sanadkii 1992 ayaa la aasaasay Protocol-kii Montreal taas oo lagu mamnuucay qiiqa gaasaskan.
Ilaa hadda, godka ku jira lakabka ozone-ka ayaa istaagay markii ugu horreysay adduunka oo dhan wuxuuna xitaa muujinayaa calaamado soo kabasho, taasna waxaa uga mahadcelinaya baabi'inta qiiqa gaasaskan baabi'inaya. Sidee bay u egtahay aragtida ozone ee dhulkeena?
1 Yaraynta godka Ozone
2 Saamaynta kululaynta adduunka
Yaraynta godka Ozone
Xogtaan waxay u taagan tahay guul dhameystiran marka la tixgelinayo xaaladda lakabka ozone-ka adduunka oo dhan. Thanks to dhow 99% walxaha xaalufinaayo ozone Waxay joojiyeen in hawada loo sii daayo, godka lakabka ozone wuu soo kabanayaa. Haddii aysan taasi dhicin - way sii socotaa - kororka heerarka falaadhaha 'ultraviolet rays', ee ay sababaan burburka lakabka ozone, nolosha lama jaan qaadi karno.
Inkasta oo tani ay tahay war wanaagsan, wali amaan maahan in hoos loo dhigo ilaaliyahaaga oo sii wado ka shaqeynta moodooyinka cimilada ee ka caawiya xasiloonida lakabka ozone.
Saamaynta kululaynta adduunka
Kulaylka aduunka waxay abuurtay koror heerkulka dusha meeraha (troposphere), laakiin waxay sidoo kale keentay qaboojinta lakabyada sare ee jawiga (stratosphere), taas oo u tarjumeysa xawaare aad u xoog badan oo hawo kulul oo hadda ka socota dhulbaraha dhanka ulaha.
Thanks to kordhinta qulqulka hawadan, oksijiin badan ayaa lagu duraa lakabyada sare ee jawiga, oo ugu dambeyntii loo beddelaa ozone. Sidaa awgeed, soosaarka ozone wuu ka sareeyaa. Sidaa darteed, isbeddelka lakabka ozone waxay ku xirnaan doontaa dhaqdhaqaaqa jawiga markaan ku yareynay kuleylka aduunka heshiiskii Paris.
Saadaasha jawiga cimilada ee bartamihii qarnigan waa ah "khafiifinta" lakabka aagagga dhulbaraha iyo dhumucda marka loo eego sidii markii hore ay u jiri jireen latitude iyo dhexdhexaad sare, kuwaas oo si buuxda u saameyn doona qaaradda Yurub, iyadoo si gaar ah ay ugu dhacayaan dalalka Waqooyiga Yurub.
Maaddaama gaasaska aqalka dhirta lagu koriyo ay sababaan isbeddelada kiimikada ozone, qiiqa hydrofluorocarbons (HFCs) ee loo isticmaalo qaboojiyaha iyo qaboojiyaha waa in laga hortago.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Ciencia » Daloolka lakabka ozone ayaa xasiliya markii ugu horeysay